श्रीमती अर्कैसंग लागेको थाहा पाएपछि प्रहरी हवल्दारले गरे पि’डा सहन नसकेर दे’ह’त्याग – Sanchar Patrika
श्रीमती अर्कैसंग लागेको थाहा पाएपछि प्रहरी हवल्दारले गरे पि’डा सहन नसकेर दे’ह’त्याग
July 18, 2020 304
सुनसरी – सुनसरी जिल्ला अदालतका एक न्यायाधीशको सुरक्षामा खटिएका प्रहरी हवल्दार ओमप्रकाश खतिवडाको दे’ह’त्या’ग घ’ट’नाले नयाँ मोड लिएको छ । उनले यस्तो नि’र्णय गर्नुका पछाडीको पाटा खु’ल्दै जान थालेका छन् । मोरङको उर्लाबारी–२ राजघाटका ह’व’ल्दार खतिवडाले दे’ह’त्या’ग गरेका थिए । उनका दाई , दिदी लगायत परिवारका स’दस्य’ले घ’ट’नाको कारणवारे अचम्म लाग्दो वयान दिएका छन् । श्रीमानले दे’ह’त्या’ग गरेको घ’टना सुनाउन जाँदा उनको श्रीमतीले अनौ’ठो कुरा भनेकी थिइन् ।
ओमप्रकाशका दाजुले भने एक्लै को’ठामा बसेकी बुहारीलाई कसरी त्यो कुरा सुनाउने भनेर हामी गएका थियौं, मेरो श्रीमती सहित तिन जना गएर उनलाई तिम्रो श्रीमान बि’रा’मी छन् रे भनेर सुनाउँदा श्रीमतीले उल्टै कहाँ बिरामी हुनु म’रिसक्यो रे त ? भन्दै आश्चर्यजनक जवाफ दिएको उनले बताए । ओमप्रकाशले मलाई अर्कै पुरुषको जिम्मा लगाइदिनु भनेका छन् रे तपाईहरु जिम्मा लगाउन आउनुभएको हो ? भनेर समेत प्रश्न गरेको उनले बताए । बुहा’री’लाई पी’डा परेको होला भनेर बु’झ्न जाँदा उल्टै मलाई अर्कै मान्छे’लाई जि’म्मा लगाउन आएको हो भनेर प्रश्न गरेपछि अचम्ममा परेको बताए ।
ओमप्रकाशको दिदीले पनि श्रीम’ती’लाई अति माया गरेको भाईले बुहा’रीवाट घा’त पा’एपछि देहत्याग गरेको बताएकी छन् । एकत’र्फी मा’या गरेको मान्छेले नै घा’त गरेपछि अ’सह्य भएको हुन’सक्ने बताइन् । उनले बुहारीकै कारण घ’ट’ना भएको दावी गरेको बताएका छन् । प्रहरीले बुहारी दीक्षा खतिवडा र उनकी प्रेमी भनिएका वि’शाल तामा’ङलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको छ । असार १६ गते आफैले बो’केको पे स्तोलले क’न्चटमा प्र हार गरी हवल्दार खतिव’डाले देहत्याग गरेका थिए । ‘मृ’तक खतिव’डालाई पहिले देखि नै आफ्नो श्री’मती अरुसँग ला’गेको शंका गर्दै आएका थिए ।
जवान छोराको अचानक नि’धन भएपछि बृद्ध आमा’वुवा चिन्तित छन् । वृद्ध अवस्था’मा जिवनको सहारानै खोसिए पछि बुवा काशीनाथ र आमा निर्मला दुखी भएका छन् । आमाबुवा अलग्गै बस्छन् । केही दिन अघि मात्र ओम’प्रका’श वुवाआमालाई भेट्न आएका थिए । बुवा आमाले खाना खाएर जाउ भन्दा पनि मानेनन् । बुहारीसंग राम्रो सम्बन्ध पनि नभएको सुनेका थियौं । हामीसंग नबस्ने भए’का’ले दिनहुँ भेट पनि हुदै’नथ्यो बुवा का’शी’नाथले भनेका छन् ।
उनले बुहारीले नै घ’ट’ना गराएको हुनसक्ने आशंका गरेका छन् । घ’ट’नास्थलमा पनि शं’कास्पद अवस्था भएको आफुले थाहा पाएको पनि बताएका छन् । आमाले दही केरा खाएर जा भन्दा पनि हतार गरेर ड्यु’टी गर्न गएको छोरा किन म’र्यो ? बुवा भन्छन्, आफ्नो ज्यानको माया नै मा’रेको थियो भने आमाले दिएको खानेकुरा खान पनि हतार गरेर किन ड्यु’टीमा जान्थ्यो ? आमा निर्म’लाले आफनो छोरा क’हिल्यै झ’गडा नगर्ने स्व’भाव’को भएको बता’इन् । उनले श्रीम’ती’संग नै कुरा नमि’लेका कारण मन भरि’एर आफैलाई समा’प्त पारेको बताइन् । बृद्ध आमा बुवाले बुहारीकै कारण छोराको ज्यान गएका कारण उनलाई सजायको माग गरेका छन् ।
दीक्षा, प्रहरी हवल्दार ओमप्रकासका श्री’मती हुन् । उनीहरुलाई मोरङको उर्ला’बारी नगरपालिका–२ रा’घाट’बाट पक्राउ गरिएको हो । प्रहरी नायब उपरिक्षक शर्माले भन्नुभयो, ‘मृ’तक खतिव’डालाई पहिले देखि नै आफ्नो श्री’मती अरुसँग लागेको शंका गर्दै आएका थिए । श्रीमती दीक्षा र विशालकै कारण उनी डि प्रे’सनमा पुगेका थिए ।’ कल डि’टेल अनुसार दे’ह’त्याग गरेको समयमा उनले श्रीम’तीलाई र विशाललाई फोन गर्दा लामो समय दुबैको मोबाइल व्यस्त भएपछि डि प्रेसन र आवेशमा आएर आफैले दे’ह’त्याग गरेको प्रारम्भिक अनु’स’न्धानबाट खुलेको छ ।
देह’त्या’ग दु’रुत्साहन आरोपमा पक्राउ परेका विशाल तामाङ खतिवडाकै छिमेकी हुन् । देहत्याग दु’रुत्सा’हन गरेको प्रमाणित भए दीक्षा र विशाललाई ५ वर्ष जेल सजाय र ५० हजार जरिवाना हुन सक्छ । देह’त्या’ग दु’रुत्साहन बारे अपराध संहि’ताको दफा १८५ को उ’पद’फा १ मा ‘कसैले कसै’लाई देहत्याग गर्न दु’रु’त्साहन गर्न दिने वा त्यस्तो काम गर्नेसम्मको परिस्थिति खडा गर्नेलाई पाच वर्ष कैद र ५० हजार रुपैया जरिवाना हुने प्रावधान रहेको छ ।
भिडियो रहेका छन् हेर्नुहोला
Prevनेपालकै कान्छा ज्योतिषीले फेरी गरे नेपालको यस्तो भबिस्यवाणी
Nextफेसबुक म्यासेन्जरमा पनि स्क्रिन शेयरिङको सुविधा
ललितपुरको पाटन अस्पतालमा उपचाररत दुई जना कोरोना संक्रमितको मृ,त्यु भएको छ ।